Home » Qormooyinka » WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray:Dr.Xuseen Sheekh Axmed (kaddare)	WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray:Dr.Xuseen Sheekh Axmed (kaddare)
04/05/2017	230 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa.
Run ahaantii, sababaha dhibaatooyinkaa dhaliyey waxay naga soo galeen xagga Reer magaalka, mana ahan kuwo loo garaabi karo, waxaana sideedaba ay soomaalidu ku maahmaahdaa:
inaad leedahaa la moodaa”
Warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “haddii aan Walaalow hadalka runtiisa kuu sheego ama kuusoo koobo, waxaa afafka iyo dhaqamada shisheeyaha ku faanaya oo ay la tahay inayan ka maarmi karin waa reer magaalka. Sida aad ogsoontihiin, reer miyigu waxay aamminsanyihiin ummadnimada iyo dhaqanka soomaaliyeed, waxayna mar walba garabtaaganyihiin qofkii rumeysan” ayuu yiri Warsame, umuurtaasna waxaa hory tusaale uga bixiyey Xaaji Aadan Afqalooc oo yiri:
Ninna kuma aflaxo hadal nin kale, u akhrinaayaaye
Aayaha dhulkeygiyo dantaa, lagu illaawaaye
Kuwii uurka kula jiifsadaad, arag collowdaane
Haddaan dhaqanka laysaga ekayn, laysma aamino e
Waa kala ajnabi laba kastoo, ehel wadaagaane
Afar qof oo walaalaa haddu, ruuxba beled aado
Mid waliba akhlaaq gooniyuu, kala imaadaaye
Arrinna kuma heshiiyaane way, kala irdhoobaane.
Waasuge oo aad ula dhacay sida Warsame uga jawaabay su’aalihii reer magaalka ayaa markaa inta hadalkii qaatay si jeesjees ah u yiri “anigoo huba inuusan Wadaaygay waxna dhibin waxna dhaafin, waaan hadal jacayl ugu laabanayaa dadka run mooday waxyaalihii shisheeyuhu muraadkiisa ku qunsanaayey. Tan labaad na waa isla didinkii kuwa hadda run usoo laabtay oo gartay in danahooda laga duwayay si aayahooda dambe ay u xumaadaan. Waxaa kale oo aan idin xusuusinayaa intaan horey u ogeyn inaad dhalanteedka ka degi doontaan, maxaa yeelay, waxay soomaalidu ku maahmaahdaa:
Beentu way ku waraabisaa,
Odeygii reer magaalka ahaa ayaa inta cimmaaddiissii jilbaha ku xirtay, asagoo Shaaribka farta iyo suulka ku saloogaya yiri “Jawaabtii Warsame bixiyey hal baan ka iri, hadalka Waasuge raacinayeyna hal baan ka iri. Tan hore halbaan ka iriyoo: waxaa hadalka Warsame ka muuqatay inay reer miyigu mabda’ ahaan aaminsanyihiin qorridda Af-soomaaliga, laakiin ayan wakhti u heli karin
waxbarashada. Wuxuu kaloo Warsame si caddaan ah noogu muujiyey inay reer miyigu aad uga xumaayeen ku dhaqanka afafka shisheeyaha. Haddaba, waxaan idin leeyahay haddii aadan baran sida loo qoro iyo sida loo akhriyo wuxuu afku ka dhiganyahay biyo ubbada kaaga buuxa oo aad ka oomantahay, isticmaalkiisuna wuxuu ku koobanyahay labada qof oo ismaqlaya oo kaliya. Haddaad sidaas ku adkaysataanna waxaad ku sifoobeysaan Abwaanno aan ku camal falayn murtida ay afkooda ka sheegayaan. Bal waxaad xasuusataan maahmaahdii qaayaha lahayd, isla umuurtaanna ku saabsanayd, ahaydna:
La soco Qeybta 25-aad, Berri haddii Alle idmo.
Previous: Maamulka Mahadaay Oo Ka Digey Fatahaad Uu Sameeyo Wabiga Shabelle
Next: Qaramada Midoobay oo war ka soo saartay dilkii wasiir Cabbaas